DEG DEG+AKHRISO: Xildhibaanada Mooshin-Wadayaasha oo Mooshin cusub keenay, Xaggeese ku wajahan yahay & Dadaal adag oo socda? – Puntlandtimes
DEG DEG+AKHRISO: Xildhibaanada Mooshin-Wadayaasha oo Mooshin cusub keenay, Xaggeese ku wajahan yahay & Dadaal adag oo socda?
March 29, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ee horey mooshinka uga keenay gudoomiyahooda Maxamed Cismaan Jawaari ayaa hadda bilaabay mooshin cusub oo ay ka keenen Dastuurka iyo Xeer hoosaadka golaha, kaas oo ku saabsan in wax ka bedel lagu sameeyo mid kamid ah qodobada cadeynaya sidda codka kalsoonida loogu qaadayo Guddoonka golaha baarlamaanka Faderaalka.
Sheekada xiisaha leh ayaa ah in xildhibaanadaas ay dadaal xoog badan u raadinayaan sidii codka kalsoonida ay ugu heli lahaayeen in la bedelo qodobka Oranaya u codeynta gudoomiyaha baarlamaanka ayaa noqonaysa mid QARSOODI ah, taas oo ah arrin adag waqtigan in la sameeyo.
Mid kamid ah xildhibaanada arrimaha ku foogan ayaa sheegay in ay talaabadan u qaadeen si ay u cadaato in xilka laga qaado Gudoomiyaha baarlamaanka, wuxuuna sheegay in dadaalkan uu yahay mid ay horgeyn doonaan golaha Sabtida nagu soo beegan.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo kamid ah ragga loolanka adag ugu jira sidii meesha looga saari lahaa gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa maalin sii horeysay u sheegay warbaahinta gudaha in aysan suuragal aheyn in hadda la bedelo qodobada Dastuurka iyo xeer hoosaadka, isla haddeerna aanba loo adeegsan karin mooshinkan yaala.
Mr, Goodax ayaa hadda ku jira xildhibaanada loolanka ugu culus ugu jira sidii meelmar looga dhigi lahaa in labedelo hanaanka codeynta Mooshinka xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka, taas oo muujinaysa in aan la aaminin balanta iyo hadalada horre.
Doonistan cusub ayaa ka dhigan in ay Xukuumaddu dareentay isku haleynta Gudoomiye Jawaari oo gaartay heerkii ugu sareeyey, ayna hadda uga guuleysan karaan oo kaliya arrimaha ku saabsan in banaan yaal laga dhigo codka kalsooni u qaadida Gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka.
Garabka Jawaari ayaa doonistan cusub ku sheegay Isdil siyaasaded, kaas oo ay wadaan garabka Xukuumadda, waxayna sheegeen in haddii aan laga soo waaqsan waxa socda ay dhabaha u xaari doonto xaalad adag oo siyaasadeed, taas oo aan la mahdin doonin miraha ka dhasha.
Laakiin arrimaha xiisaha leh ayaa in Xildhibaano gaaraya 120 Mudane ay xalayba cadeeyeen in uu Mooshinkaas fashil kusoo dhamaaday, loona baahan yahay in wadiiqada rasmiga ah ee sharciga dib loogu laabto, baarlamaankana loo madax banaaneeyo shaqadiisa, iyadoo xooga la saarayo sidii Soomaaliya uga soo bixi lahayd marxaladda ay hadda ku jirto.
kuwaan waqtiga waxay nooga dhumiyeen mooshin aan dhamaan isqabqabsi sidii loogu jiray ayaa waddankii halis ku jiraa oo cadowgii soomaaliyeed ka faa;iidaysanayaa qaraxyo reer shabaab iyo Dowlado noosoo bililiqo tagay ileen annagaa isku maqan sidaa darteed waa in ladaadiyaa Golaha Baarlamaanka dhamaan laguna soo xulaa muddo saddex bilooda lana soo xulaa xildhibaano lagu soo xulo aqoontooda iyo daacadnimadooda waddaniyadooda waa ayaan darro in loo diido dowladdu in ay wax qabato oo lugaha la haysto waa wax laga xishoodo in laga tabco dhaqaale mooshin laguna tunto xaquuqdeena ka shacab ahaan iyo dalkii oo la dayacay.
Kuli wa mujrimin wo tugo ah allow ka qabo musliminta kuwan iyo kuwa shegta kanacsato
Madaxweynaha puntland ee dhabta ah C/raxmaan Faroole says:
Ilaahow Barakee JAMHUURIYADA MADAX BANAAN EEN QADAADWEYNU UTALIN EE SOMALILAND DAD CAQLI U SAAXIIB AH AYAA ILAAHAY U DHALIYEY JAMHUURIYADAAS
Ha bakhleeyo talyaani
KHAAKH WAAYE KULAHAA FAROOLE WAAR HADDAAD ISLAHAYD FAROOLAA ICTIRAAF KULA RAADIN LAAHAA WAA KHAAKH.